KNU-JAPAN: 10月 2010
အန္ဒမန်-နီကိုဘာ ခေါ် ကပ္ပလီကျွန်းမှပေးစာ
ဓညလင်း - Saturday, 30 October 2010
မှတ်ချက်။ ။ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်လို့အချိန်ယူပြီးဖက်စေလိုပါသည်။
Written by http://www.narinjara.com
အန္ဒမန်နှင့်နီကိုဘာကျွန်း Andaman & Nicobar (A&N) Island (ခေါ်)ကပ္ပလီကျွန်းရှိ Port Bliar ပို့ဘာလေးယားမြို့သည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်ထက်က ဗမာ ပြည်အပါအ၀င် အိန္ဒိယတိုက်မှအကျဉ်းသားများကို တစ်ကျွန်းပို့ထားသော (ယခုဗမာပြည်ရှိ ကိုကိုးကျွန်းလို) တကျွန်း မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမျိုးချစ် သူရဲကောင်းများ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ မတရားထောင် ချ ညှင်းပမ်းမှုဒါဏ်များကို အလူးအလဲခံရင်း နောက် ဆုံး ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အစိုးရကို ထောင်ထဲမှာပင် တော်လှန်ရင်း အသက်ပေးသောကြောင့် ပို့ပလေးယားမြို့ရှိ (Cellular Jail) သည် အလွန်ကျော်ကြားပြီး၊ ယခုအခါ ၎င်းထောင်ဟောင်းကို အများပြည်သူများ ကြည့်ရှု့နိုင်ရန် ပြတိုက်အဖြစ်ပြထားသည်။ ထောင် ထဲမှာ အသက် စတေးခံယင်း လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော သူရဲကောင်းများကို ရုပ်ထုများ ထုလုပ်ကာ တခန်းတနားဖြင့် ဂုဏ်ပြုပူဇော်ထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ Freedom Fighter ခေါ် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ၏ ရဲရင့် သန့် ရှင်းသော ၀ိဥာဏ်များကိန်းဝပ်ရာ ဤသမိုင်းဝင်ကျွန်းကြီးတွင် ၎င်းသူရဲကောင်းများ နည်းတူ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးလွတ်လပ်ရေးနှင့် တန်းတူရေးတို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော ရခိုင်နှင့်ကရင် တော်လှန်ရေးသမား(၃၄)ယောက် တို့ကို နှစ်ရှည်လများ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး ဖြည်းဖြည်း စိတ်ဓါတ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးကာ အနာဂါတ်ပျောက်အောင်အတွက် ကျကျနန ဖန်တီးနေ ခြင်းသည် အလွန်အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်လှပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 21:170comments
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံသို့Click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 19:550comments
မဲရုံတွေကို မသွားပါနဲ့၊ မဲမပေးပါနဲ့ (ဦးဝင်းတင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်) click
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံ click
မူဆယ်မြို့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌအိမ် သေနတ်ပစ်ခံရ၊ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် (၂) ဦး သေဆုံး click
ကရင်နီတပ်မှ ပွန်ချောင်းတံတား ဖောက်ခွဲသည့်အပေါ် ရွာသားများ စိတ်မကောင်း click
မွန်ရွာသားနှစ်ဦး သေနတ်ထိမှန် သေဆုံး click
နအဖစစ်သားတဦး လက်နက်နှင့်အတူ ထွက်ပြေး click
ရခိုင် အင်တာနက်လိုင်း ဖြတ်တောက်ခံရ click
မြေပုံမြို့နယ် ဂီရိဒဏ်ထိ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ) click
မြေပုံမြို့နယ်မှ သေဆုံး (၈၃) ဦး စာရင်း click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 16:360comments
ဒါကိုဖက်ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းပေးပါ
By ပြည်တွင်း ဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦး
၆၊ ၆၊ ၆၄ သင်္ဘောကျင်းအလုပ်သမားတွေက လုပ်ငန်းခွင်သာယာရေး၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ လုပ်ခ လစာတိုးမြှင့်ရေး စတဲ့ အလုပ် သမား အခွင့်အရေးတွေအတွက် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြတာကို အာဏာရှင်တဖြစ်လဲ မ.ဆ.လ အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ အလုပ်သမား အမြောက်အများသေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ ဇွန် အရေးအခင်းလို့ ဆိုကြပါတယ်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 23:150comments
နအဖစစ်အစိုးရ၏မတရားသည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်၊ မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး (၈၉)လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ တိုကျိုမြို့ရှိနာဂါဝါ ရှိ မြန်မာ စစ်အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့တွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ နေ့လည် ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ရီ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့သည် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း နေသော်လည်း လစဉ် ပုံမှန် ကျင်းပလာခဲ့သည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိူင်ငံရောက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ တက်ရောက် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 22:140comments
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပမည် click
ကလေးမြို့ ကြေညာစာတမ်းကို အဖွဲ့အစည်းများ ထောက်ခံ click
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်များ မဲမပေးရေး စည်းရုံးရေးဆင်း click
မြန်မာစစ်အစိုးရ လှည့်စားနေကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ ဝေဖန် click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 22:080comments
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ (ဘုရားကုန်း) ၏ ခေါင်းဆောင် ပဒိုအောင်ဆန်းသည် နအဖ ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
ဘန်ကောက်နှင့်ရန်ကုန် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က “ဒီ လာမယ့် ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့အဖိုးကြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနေ ၀င်ရမယ်။ သူ့ကို အထက်ကလည်း ၀င်ဖို့တိုက်တွန်းထားတော့ ဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရဘူး။ အခု မဲစည်းရုံးရေးတွေ စလုပ်နေပြီ၊ ပိုက်ဆံကတော့ သိန်းထောင်ချီပြီး ကုန်ဖို့ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:030comments
မြန်မာ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ဝင်ဘာတွင် လွှတ်မည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရှေ့လအတွင်း နေအိမ်အ ကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းထားရာမှာ မြန်မာအဏာ ပိုင်တို့ ပြန်လွတ်ပေးမည်ဟု အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မာသီနတ်တလီဂါဝါက သောကြာနေ့တွင် ပြောဆို လိုက်သည်။
ဟနွိုင်းမြို့တော်တွင် ကျင်းပနေသော အရှေ့တောင်အရှ ထိပ်သီးညီလာခံတွင် မြန်မာနိုင် ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥဏ်ဝင်း အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်တော့ပြန်လွတ်မလဲ ဟု မေးမြန်းခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး နတ်တလီဂါဝါက ဒေါ်အောင်းဆန်းစု ကြည် သည် သူမရဲ့ အပြစ်ဒါဏ်ကိုကျခံခဲ့ပြီး၊ အကျဉ်းကျ ကုန်ဆုံးရက် ကို အစိုးရက မျက် ကွယ် မပြုသင့်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြစ်ဒါဏ်ဟာ လာမယ့်နိုဝင်ဘာ လမှာ ပြီးဆုံးမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ သတင်းထောက်များကိုပြောဆိုခဲ့သည်။
နေ့ သစ် မှ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:250comments
မြစ်နဒီ ကိုးသွယ် မှ ထပ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြသည်။ ပေးပို့ သူ ကိုဘို ဘို ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:590comments
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးစိတ်ဝင်းစားသော နိုင်ငံခြားသားမျာ AirBagan ကိုဆန္ဒပြ Click
နအဖတပ် နယ်ထပ်ကျွံလာရင် နောက်မဆုတ်တမ်း ခုခံရန် အပစ်ရပ် SSA စစ်မိန့်ထုတ်ထား click
မဲပြားနှင့် အလံများ သယ်လာသည့် နအဖစစ်ကြောင်း အတိုက်ခံရ click
အာရှ ခရီးစဉ် အတွင်း အိုဘားမား မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးဖွယ်ရှိ Click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:580comments
အလှည့်ကျ မနွဲ့ကြေး
ကာတွန်း။ ။Tamla KNU (Japan)
ဂျပန်အစိုးရ မှ ထိရောက်သော အားပေးကူညီမှုများ ပေးရန်တောင်ဆို ဆန္ဒပြပွဲ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လိုလားသူများ နှင့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး ကူညီဆောက်ရွက် ပေးနေသော ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းများ ပူပေါင်းကာ ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် ထိရောက်သော အားပေး ကူညီမှုများပေးရန် ချီတက်ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ချီတက်ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲအား တိုကျိုမြို့၊ ခစုမိဂဆဲခိ ရပ်ကွက်ရှိ ဂျပန်အစိုးရ အခြေစိုက်ရုံးများရှေ့မှ လူအင်အား ၃၀၀ ခန့်ဖြင့် စီတန်းဖြတ်လျှောက်ကာ ဆန္ဒပြတောင်းဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:350comments
ပြင်ဝန်းချောင်းတွင် မျောနေသော အလောင်များ မြုပ်နှံမည့်သူမရှိ ဖြစ်နေ click
အာဏာပိုင်များ ခွင့်ပြုချက်မရ၍ မြေပုံ ဂီရိဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ ဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်း မရှိသေး click
ရခိုင်လေဘေး အမေရိကန် ကူညီရန် ကမ်းလှမ်း click
ကချင်ရွာဥက္ကဋ္ဌအိမ်ထဲ KDA ဟောင်းက ဗုံးပစ်သွင်း၊ (၇) ဦးခန့် ဒဏ်ရာရ click
ပဲခူးဖောက်ခွဲမှု စစ်အစိုးရ ABSDF ကို စွပ်စွဲ click
မွန် ခွဲထွက်အဖွဲ့၏ လက်နက်အပ်ပွဲ ရတခ၌ ကျင်းပ click
- နိုင်ရှောင်းတို့အဖွဲ့ လက်နက်အပ် ပြည်သူ့စစ်လုပ်ပြီ click
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်များ မနက်ဖြန်မှစ၍ ပိတ်မည် click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:210comments
မွန်ပြည်သစ်ရုံး ဆိုင်းဘုတ်များကို အာဏာပိုင်တို့ ဖြုတ်ခိုင်း click
အားလုံးပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ အချိန်မနှောင်းဟု ဘန်ကီမွန်း ပြော click
အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး ပြုလုပ် click
အင်းစိန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံတကြောတွင် မဲမပေးရေး စာရွက်များဖြန့် click
ဝေနှင်းပွင့်သုန် ပြောတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း click
တနိုင်ငံလုံး မဲရုံဝန်ထမ်း သန်းနှင့်ချီ ရှိမည် click
ကရင်နီလူငယ်များ အတွေ့အကြုံ ရချင်၍ မဲထည့်ချင်ဟုဆို click
မလေးရှားမှ မြန်မာအလုပ်သမားများအရေး ကုမ္ပဏီက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး click
မထောက်ခံသည့် ခလရ (၁၈)ကို ကြံခိုင်ရေးကရန်လုပ် Click
ရန်ကုန်မြို့တွင်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာချ Click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:300comments
စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေ စီးပွားရှာဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်က ပြည်သူပိုင် ကြယ်ငါးပွင့်လုပ်ငန်းကို သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာ “လန်းပြီ” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီး
ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေပါတယ်။
“လန်းပြီ” ဆိုတဲ့ နာမည်က ဗေဒင်ယတြာသဘောအရ ပေးတာလို့ ဦးပိုင်ဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။ ကြယ်ငါးပွင့်အမည်နဲ့ ပြည်သူပိုင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြစဉ်က ခွက်ခွက်လန်အောင် အရှုံးပေါ်ခဲ့လို့ လန်းပြီဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဗေဒင်ကိန်းဂဏန်း ပေးတာလို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကြယ်ငါးပွင့်လုပ်ငန်း ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးခဲ့ရတာက နာမည်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးတွေ အပါအ၀င် ၀န်ထမ်းတွေကြားမှာ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း မတော်မတရား လိုချင်လောဘနဲ့ လာဘ်စားမှုတွေ လုပ်ခဲ့လို့ပါပဲ။
အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင်က ဗေဒင်ယတြာကို ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပြီး ပုဏ္ဏားတွေကို အိမ်တဆောင်၊ မီးတပြောင် ဆောက်ပေး၊ ဗေဒင်ဆရာ ပြောသမျှ မြေ၀ယ်မကျနားထောင်၊ ယတြာတွေ ချေနေတာပါ။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:010comments
ချက် နှင် အလံတော်ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြပုံ
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:150comments
KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့မှာ ၂၀ဝ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ရက်နေ့က ကျင်းပသော ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် KIO တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၀ဝခန့်က လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇောင်းဟရားကို ချီတက်အလေးပြုခြင်းသည် ထူးခြားမှုအဖြစ် ယူဆကြပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:070comments
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 9:550comments
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်) ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:460comments
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဒေသအသီးသီးသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်များ တင်ပို့မှုကို ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း သိရ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဒေသအသီးသီးသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်များ တင်ပို့မှုကို ယနေ့ (၂၅-၁၀-၂၀၁၀) မှစ၍ ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ''မနေ့က (၂၄-၁၀-၂၀၁၀) အထိ လေယာဉ်နဲ့ဂျာနယ်တွေ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမနက်မှာ ပုံမှန်အတိုင်း ပို့ဖို့သွားတော့မှ ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတာ သိရပါတယ်''ဟု ဂျာနယ်ဖြန့်ချိရေး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:500comments
ဂီရိမုန်တိုင်းအတွင်း အသေအပျောက်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစာရင်း တိုးလာ click
ဂီရိမုန်တိုင်းကြောင့် အသေအပျောက်နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အစိုးရမီဒီယာ မဖော်ပြ click
ပခုက္ကူအနီး ရေနံပိုက်လိုင်းပေါက်၊ အနည်းဆုံး (၁၄) ဦး သေဆုံး click
မြေပုံမြို့နယ်တွင် သေဆုံးသူ အလောင်း (၅၀) ခန့် တွေ့ရှိ၊ ကျောက်ဖြူတွင် ဒုက္ခသည်များ အစိုးရထံမှ အကူ ညီ မရရှိသေး click
ရခိုင်လေဘေး အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လိုအပ် click
ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဂီရိမုန်တိုင်း ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့ (ဓာတ်ပုံ) click
ရခိုင်မုန်တိုင်းဘေး ဓာတ်ပုံတချို့ click
မြေပုံမြို့နယ် အပျက်အစီး click
သီးညီနောင်နှင့် အမျိုးသမီးငယ် လူရွှင်တော်လေးများ click
ယနေ့မြန်မာသို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှ ပေးစာ (လိုင်စင်မဲ့ကား လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့ ကိစ္စ) click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:410comments
နေပြည်တော် တွင် မီးရောင်တောက်ပပုံ
နေပြည်တော် စာတိုက်ကြီး ၀န်ထမ်းတွေက ညဘက်လည်း အလုပ်လုပ်ပုံရတယ်။
ဒါကြောင့် တခြားမြို့ တွေ မီးပျက် မီးမလာပေမယ့် အဲဒီမှာတော့ ထိန်ထိန်လင်းနေတယ်။
ဒီကနေ့ သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။
Posted by zarny win at 11:23 PM
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:510comments
ဂျပန်နိုင်ငံ (RHQ) Refugee Head Quarter မှ အကြိမ်(၃၁)မြောက်ချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ သြစတြေးလျ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ဆန္ဒပြ click
ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ဖို့ အတိုက်အခံအင်အားစု တောင်းဆို click
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ဖို့ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကြေညာ click
ဒုတိယ ပင်လုံအတွက် ကလေးမြို့ ကြေညာစာတမ်း click
ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်း click
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရတပ်တွေ တိုးချထား click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 9:340comments
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ရေးအဖွဲ့ညှိနှိင်းအစည်းအဝေး
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ(ဂျပန်)မှ ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေသည့် အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) Takadanobaba, Recycle Center,4F ၌ ယနေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ညှိနှိုင်းစည်းဝေးတွင် ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိရောက်သည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုကိစ္စရပ်များတို့ကို ပြုလုပ် အကောင်ထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရှေ့ဆက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် သွားကြမည့် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှာလာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဂျပန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျပန်လွှတ်တော်ကိုပတ်ပြီး ဂျပန် လွှတ်တော် အမတ်များအားလုံးသိအောင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လက်မခံသည့် ချီတက် လှမ်းလျောက်ဆန္ဒပြပွဲ အစီအစဉ်နှင့် အောက်တိုဘာလ ( ၆ ရက်. ၇ ရက်)နေ့ နအဖ အခွန်ရုံးရှေ့ ကျင်းပသွားမည့် ဆန္ဒပြ အစီအစဉ်များတို့ကို ညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ရက်ကြီးများသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ရေး အတွက် သီးခြားအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဒီမိုကရေးစီအရေး လှုပ်ရှားသူ များ အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ကြရန်လည်အထူတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ ။ မိုးမင်းသူ KNU (Japan)
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ ။ မိုးမင်းသူ KNU (Japan)
"ကရင်လူမျိူး" လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းကောင်း လေးတပုဒ်တွေ့ ၍ ထပ်ဆင့် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိူးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အခြေခံပြီး စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 16:250comments
မုန်တိုင်း အဓိက တိုက်ခတ်ရာ ဒေသများတွင် ရေနှင့် အစားအစာများ အကြီးအကျယ် ပြတ်လပ်နေ click
ဂီရိကြောင့် ကျောက်ဖြူတမြို့လုံးနီးပါး ပျက်စီး click
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း မုန်တိုင်း မိုးသည်းထန် click
ဂီရိမုန်တိုင်း အားပျော့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ၀င်ရောက် click
အဖမ်းခံရသည့် KIO ဆက်ဆံရေးအရာရှိ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ click
NLD ဗဟိုအဖွဲ့ ကလေးမြို့မှာ တင်ပြဆွေးနွေးနေ click
ရွေးကောက်ပွဲအကြို အင်တာနက်နှေးခြင်း ပြတ်တောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေ click
ရွေးကောက်ပွဲက ရမယ့် ရလဒ်များ click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 15:250comments
အမျိုးသားညွန့် ပေါင်း အလံတော်နှင် ထပ်တူပါပဲ
အလံပိုင်ရှင်အစစ်မှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်ပါကြောင်း
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 9:560comments
ဂီရိဆိုက်ကလုံး တနာရီလျှင် ပြင်းအား (၁၄၇) မိုင်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်နေ click
မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး စတင်ဆောင်ရွက် click
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ် တိုးချ click
ကေအိုင်အိုနယ်ထဲသို့ ဆေးဝါးနှင့်ရိက္ခာ ပိတ်ပင်၊ ဒေသခံလူထု ဖျားနာသေဆုံးမှုများရှိ click
ဒုက္ခသည်များကို ပြန်မပို့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား click
ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ပြန်ရမယ်လို့ဆို click
အဖွဲ့ချုပ်အတွက် တကိုယ်တော် စည်းရုံးရေးဆင်း click
ထောင်ပြန် (၂) ဦး ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက် click
ကြိုတင်မဲပေးသည့် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်မရ click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 9:440comments
ရန်ကုန်တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာဖြင့် တီရှပ်စစ်ပွဲ ကိုဖန်တီးနေနိုင်
"မဲမပေးဘဲ နေနိုင်တယ်" ................................. I vote (မဲပေးမယ်)
“I vote (မဲပေးမယ်)” အုပ်စု ပေါ်ထွက်လာတာဟာ မိမိတို့အတွက် ပိုပြီး အားကောင်းသွားစေတယ်လို့ "မဲမပေးဘဲ နေနိုင်တယ်" အုပ်စုဝင် တဦးက ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ မဲမပေးဘဲနေနိုင်တယ် တီရှပ် '' တွေ ၀တ်ပြီး မြို့ထဲသွားရင်လာရင် လူတွေက ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်။ သူငယ် ချင်းတချို့ကို ပေးဝတ်တာ သူတို့ ၀တ်ဖို့ စိုးရွံ့နေကြသေးတယ်။ ကျနော်တို့က ရှင်းပြရတယ်။ ဒါဟာ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရကိုယ်တိုင်ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေပါစာသားကိုပဲ တံဆိပ်ရိုက်ထားတာ။ ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီး ရှင်းပြရတယ်။ I vote အဖွဲ့က အခုလို ၀တ်ပြီးထွက်လာတော့ မဲမပေးဘဲနေနိုင်တယ် တီရှပ်ကို ၀တ်ဖို့ လူတွေမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ မရှိကြတော့ဘူး"လို့ သူက ပြောပါတယ်။ လူတွေရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်တာဟာ I vote အဖွဲ့ရဲ့ တန်ပြန် လှုပ်ရှားမှုပဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက သုံးသပ်ပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကို ဖမ်းဆီးလို့မရဘူး။ မရတဲ့အတွက် သူတို့ တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုပဲ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လူတွေ သိသွားကြပြီ။ သိသွားတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သူတို့လည်း ၀တ်မယ်ပေးပါဆိုပြီး လာတောင်းလာကြပြီ"လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မဲမပေးဘဲနေနိုင်တယ် တီရှပ်တွေကို လူငယ်တစုက သူတို့ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးနဲ့ စာသား ရိုက်နှိပ်ဝတ်ဆင် နေကြတာဖြစ်ပြီး လိုလားသူတွေကို ပေးဝေဖို့ဆိုရင်တော့ အလှူရှင်တွေ ရှိမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 14:120comments
၂၀၁၀ ပြည်သူ ရွေးကောက်ပွဲ .......... ရလဒ် ???
ကာတွန်း ။ ။ TAMLA KNU(Japan)
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:540comments
ကချင်ငြိမ်းအဖွဲ့ စစ်ရေးပြင် click
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် လုံခြုံရေး ပိုချထား click
နိုင်ငံတော်အလံသစ် တင်ပြီး အလံဟောင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည် click
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်အလံအသစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြု click
အလံသစ်၊ ယတြာနဲ့ သန်း (၆၀) ကို ကိုယ်စားပြု မပြု click
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထူးအယူခံ နောက်ဆုံးအဆင့် ကြားနာရန် လက်ခံ click
ပျဉ်းမနား နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲ ကန့်သတ်ခံရ click
တိုင်းရင်းသားပါတီအား အပြစ်ရှာ ပယ်ထုတ်ရန်ရှိဟု ဦးသိန်းစိန် ပြော click
ဦးအောင်ကြည် မဲဆွယ်ရန် ကွန်ပျူတာများ တောင်းခံ click
ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးလျှင် ဖမ်းဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်နေ click
ဦးတေဇ ကျားမွေးတော့မည် click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:450comments
မြန်မာရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ကော်မတီ (ဂျပန်) မှ ကုလသမဂ္ဂအား မြန်မာ အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာ အရေးယူရန်တိုက်တွန်း
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:470comments
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်လာမလား၊ သွေးစွန်းကြဦးမှာလား??
လာမယ့် လပြည့်နေ့မှာ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။
ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ကြပါသလဲ။
လပြည့်နေ့ကတော့ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် (စနေနေ့) ကျပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကတော့ ၁၇ ရက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရန် ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တောင်းဆို click
ပြည်သူ (၂၀၀၀) ကျော် ဆန် ပြတ်လပ်နေ click
ကင်းစောင့် နအဖတပ်သားက အပြစ်မဲ့ ရွာသားအား ရိုက်နှက် click
လမ်းကင်းဂိတ်စောင့် ပုလိပ်များ အားလုံးဆုတ်ခွာရန် မိုင်းနောင် စကခ (၂) ညွှန်ကြား click
မြစ်ကြီးနားတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်စာရွက် ကပ်ခဲ့ click
မြိတ်မြို့နယ်၌ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှား click
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်လာမလား click
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်က ရှောင်တခင် စစ်ဆေး click
မလေးရှားနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက်ခံရတဲ့ အလုပ်သမား (၂) ဦး ဥပေက္ခာပြုခံရ click
၂၀၁၀ ကြို တင်မဲပေးခွင့် ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြ ပွဲ (တိုကျို) တွင်ကျင်ပ
မဲရုံတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် မပေးခြင်းအား သတင်းထောက်များ ဝေဖန် click
နအဖ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်၏ နောက်ဆုံးခရီး ဖြစ်ဖွယ်ရှိ click
ရွေကောက်ပွဲ အကဲခတ်အဖွဲ့ လာခွင့်ပိတ်သည့်အပေါ် အမေရိကန်ကုလ ဝေဖန် Click
ရန်ကုန်က လာတဲ့ စာ click
ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ စစ်တပ်က ဝင်ဖမ်း click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:220comments
ရွေကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းရန် ကြေငြာချက်ပေါ်ထွက်လာ
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:170comments
ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမတ်လောင်းများကို မိုးကြိုးပစ်
Written by www.narinjara.com/
Monday, 18 October 2010 03:53
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ယခုလက်ရှိ ရေပန်းအစားဆုံး သတင်းမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ အမတ်လောင်းများ မိုးကြိုးပစ်ခံရသော သတင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သတင်းကြောင့် ဒေသခံများ အထူး ၀မ်းမြောက် နေကြသည်ဟု သိရသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:030comments
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ဒီနေ့ဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မွေးနေ့မှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ကျိုင်းတုံထောင်တွင်း တနေရာမှာ ၆၅ နှစ်တာ နှစ်ရှည် အကျဉ်းသားအဖြစ် ကျခံနေရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ပန်းပုဆရာတဦးက သူ့ရဲ့ ပုံတူ ပန်းပုရုပ်တရုပ်ကို ထုလုပ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီပန်းပုဆရာထုခဲ့တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ပုံတူရုပ်တု ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ပန်းပုဆရာရဲ့ ဂုဏ်ပြုစာလွှာကိုပါ ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် ပရိသတ်များအတွက် ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ရဲ့ အသက် (၄၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲဂျပန်တွင် ကျင်းပ Click
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ရဲ့ အသက် (၄၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ click
မလေးရှားမှာ ကျင်းပတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ (၄၈) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထူးအယူခံ ကြားနာ click
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် “တွီတာ” သုံးချင် click
မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိစ္စ ကေအိုင်အို ကြေညာချက်ထုတ် click
မိုင်းထိ ရွာသားများ ကေအိုင်အို ထောက်ပံ့ click
မဲ့ဆွယ်မှုကို အခြေခံပြီး ပါတီအချင်းချင်း ရိုက်ပွဲ ဖြစ် Click
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် မဟုတ် (ရုပ်သံ)
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:310comments
Zoya Phan, International Coordinator at Burma Campaign UK, speaks at European Parliament 30th September 2010
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 11:040comments
ဂျပန်ရှိ မြန်မာသံရုံးက ကြိုတင်မဲ ကောက်မည် click
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ရန်ပုံငွေအတွက် ဝေနှင်းပွင့်သုန် အမြင့်ပေ (၁၆၀) က ခုန်ချ click
မြန်မာနယ်စပ်မှာ ထိုင်းလုံခြုံရေး တိုးမြှင့် click
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ် ပိတ်ထားသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး ရပ် click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:530comments
ဂျပန်တွင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရှိသူဇနီးမောင်နှံ၏ ဆန္ဒမဲကန့် ကွတ်ပုံ
ဂျပန်ရောက် တရားဝင်အလုပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် Visa ဖြင့် နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသား ကျနော်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ၏ မဲဆန္ဒကန့် ကွတ်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါတယ်။
"ကျနော်နဲ ကျနော်မိန်မကို ဆန္ဒ မဲ ပေးပိုင်ခွင့် စာရွက်တွေ စာတိုက်ဗုံးထဲက တွေလို မြန်မာသံရုံးက မဲပေးရန် စာရွက်များဖြစ်ကြောင်ကို သိတာနဲ အမှိုတ်ရှုတ်မခံပဲ အမှိုတ်ဗုံးထဲကို ပစ်ထဲ့ လိုက်တယ်၊ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ကြည့်မနေ တော့ ဘူး၊ ကျနော်တိုက အမြဲတမ်းကန့် ကွတ်ပြီးသားပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ တပတ်ကပဲ အခွန်ရုံးမှာ အခွန်ဆောင် လိုက်ရတာကလည်း နည်းတာမဟုတ်ဘူး မြန်မာငွေနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် ၁၅သိန်းခွဲ လောက်ညီမျှတယ် ဂျပန်မှာကအလုပ်ကလဲ အရမ်းခတ်ခဲနေတာ သူတို အသိပဲ အခွန်ကိုတော့ ရှော့ ပေါ့မယ်စိတ်မကူးဘူး အခွန်ကိုအတင်းချမယ်ဆိုတာပဲ၊ ဂျပန်မှာဆက်နေချင်တော့ ဘယ်တက်နိင်မလဲ မိမိနိုင်ငံ မှာက ရှာစားလို့ မှမရတာ၊ တိုင်ပြည် ကောင်းစားမှပဲ ပြန်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်၊ ကျနော်တို့ က နအဖ ကိစ္စမှန်သမျှကို ဆန့် ကျင်ကန့် ကွတ်ပြီသားပဲ ဂျပန်ရှိ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှာသူများကိုလဲ အားပေးပါတယ် ......."
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 10:030comments
မြန်မာပြည်တွင်း ရဲရင့် စွာ ပြည်သူဆန္ဒထုတ်ဖော်
နအဖရဲမတရာတဲရွေးကောက်ပွဲဆန့် ကျင်တဲ့အနေ နဲ စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာပဲ ရဲရင့်စွာ်ရန်ကုန်က လူငယ်တွေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားကို အခုလို ရဲရင့်ပြတ်သား စွာ ဖော်ပြလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 9:480comments
ဒီ ပုံလေးကတော ကာတွန်း ဟန်လေးရဲ့ ရိုက်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
တဘက်မှာက မိုင်းကျင်းထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ မိုင်းလုပ်သားများကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အားတက်သယော ကူညီဆွဲတင်ပေးနေပြီးတော့၊ တဘက်မှာ တော့ နအဖ တို့ ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးက မိမိတို့ ပြထမ်းချက်ကို ဆန့်ကျင်သော ပြည်သူလူ ထု ကြီးကို ကြိုးနဲ့ တုပ် ကျင်းထဲချနေတယ် တွေ့ တယ်နော် ပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရာ။ ။
လူအချင်းချင်း နိပ်ဆက်ချင်း ကင်း ရှင်းကြပါစေ။
စာတမ်းရေးသာသူ။ ။ မိုးမင်းသူ (KNU Japan)
NLDသည် တရားဝင် ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် click
NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ရွေးကောက်ပွဲ သဘောထား ဆွေးနွေး click
KIA အား ‘သောင်းကျန်းသူများ’ ဟု စစ်အစိုးရ ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် ခေါ်ဆိုလိုက် click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 2:330comments
ဗမာ့တပ်မတော်၏ ခေတ်သစ်ကျွန် ကျေးလက်ဒေသနေ ကရင်ပြည်သူများ
တောင်ငူခရိုင်တွင် ပေါ်တာသွားရာ ဆင့်ခေါ်ခံရသော ရွာသူ ရွာသားများပုံ နှင့် နအဖ စစ်တပ်အတွက် ၀ါးများ ခုတ်ပေးနေရပုံ - ဓါတ်ပုံ KHRG
၁၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀ ရက်နေ့ တွင် ဗမာ့တပ်မတော် ခလရ (၁၀၂)မှ တောင်ငူခရိုင် ထန်းတပင်မြို့ နယ်ရှိ ရွာများဖြစ်သော ဖလေးဆာလို(ပြင်စလိုရွာ)သား ကျား ၉ ဦး မ ၃ ဦး၊ ယာလိုရွာ ကျား ၈ ဦး မ ၇ ဦး၊ ပလောဘောဒဲရွာ ကျား ၆ ဦး မ ၆ ဦး၊ လေးဧိုလိုဘောဖာရွာ ကျား ၆ ဦး မ ၃ ဦး တို့ အား ဆင့်ခေါ်ပြီး အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေလျက် ဖလေးဆာလို(ပြင်စလိုရွာ)မှ သပြေညွန့် စစ်စခန်းသို့ပေါ်တာအဖြစ် စစ်တပ်၏ ပစ္စည်းများကို သယ်ခိုင်းကြောင့် သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 15:500comments
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 15:400comments
အလောင်းဖျောက်သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး စစ်တွေ နာရေးကူညီမှု အသင်းကို စည်ပင်မှ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်း
View Blog 10/14/2010
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှ နာရေးကူညီမှု အသင်းကို စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့မှ အလောင်း ဖျောက်ဖျက် သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းခံသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ အသင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက “ သူတို့က အလောင်းတစ်လောင်းကို စည်ပင်ကို အကြောင်း မကြားဘဲ မြုပ်နှံ တယ်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 15:280comments
သီတင်းကျွတ်လဆန်း၅ရက်။အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၀။
မင်းထက်အောင်(အောက်တိုဘာ)။ ။ ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသော မြန်မာစစ်ကြောင်းများ KNU တပ်မဟာ(၆)မှ နှစ်ကြိမ်ပြောက်ကျားပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် ကျဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တပ်မဟာ(၆) ပြောခွင့်ရဗဒိုစောထဲနေက “(၇) ရက်နေ့မှာတစ်ခါ၊ (၉) ရက်နေ့မှာတစ်ခါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ ကျနော့်ဆီသတင်းဝင်လာတယ်” ဟု ပြောသည်။ယခုလ(၇) ရက်နေ့၌ ခုံခန်းရွာနှင့် တောင်စွန်းရွာအကြား တာစူးရွာအနီးလယ်ကွင်းကို ဖြတ်ကျော်နေစဉ် KNU မှစောင့်ဆိုင်း ပစ်ခတ် ခဲ့ရာတွင် ခလရ(၃၂)မှ (၃) ဦးသေ၊ တစ်ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ဗဒိုစောထဲနေက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၄င်းတိုက်ပွဲ၌ လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူ တောင်စွန်းရွာသား ကရင်အမျိုးသား စောမောင်လတ် အသက်(၄၀)ခန့်သည် ခါးလည်၌ သေနတ်ထိရှဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုလည်း KNU ကပြောသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 14:410comments
သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ၀င်ကြည့်ရန် Click
မဲပေးခွင့်ပေးတာဟာ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
ရန်ကုန်တွင် ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးစာများ ထပ်ဖြန့် click
ရွေးကောက်ပွဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဦးတည်ဖို့ အာဆီယံ တိုက်တွန်း click
နောက်တက်မယ့် မြန်မာအစိုးရ အပြောင်းအလဲ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အမေရိကန် မျှော်လင့် click
လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ နယူးဇီလန်လွှတ်တော် တောင်းဆို click
မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်လာ click
အဖွဲ့ချုပ်က မဲမပေးရေး စည်းရုံးရေးဆင်း click
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ ရေကြီးနေမှု အခြေအနေ Click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:330comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲပေးဖို့ ငြင်းဆို
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးခွင့်ပြုတာဟာ စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ လွဲချော်နေတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြလိုက်သလို ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူမဲပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ပြောလိုက်တယ်လို့ သူ့ကို ဒီကနေ့ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရှေ့နေတွေကတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ လာရောက် အကြောင်းကြားစဉ် အခုလို ပြောလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 13:270comments
လားရှိုး သမိုင်းဝင် စေတီ အင်္ဂါဒေါင့် ခြင်္သေ့ရုပ် မိုးကြိုးပစ်
လားရှိုးမြို့ သမိုင်းဝင် မန့်ဆု စေတီတော် အင်္ဂါဒေါင့်ရှိ ဆွမ်းတော် စင်အား မိုးကြိုးပစ်ချရာ ကြံ့ဖွတ် ပါတီဝင် အတွက်နိမိတ် မကောင်းဟု ဒေသခံလူထုအကြားသတင်း ပြန့် နေကြောင်း သျှမ်းမြောက်သတင်း ရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
“အင်္ဂါဒေါင့် ခြင်္သေ့ရုပ်ရှေ့က ဆွမ်းတော် စင်တည့်တည့်ကိုပစ်ချတာ ၂ တောင် လောက်ဝင်သွားတယ်။ အဲဒီ ခြင်္သေ့ ရုပ်ရှေ့ မှာ နအဖစစ်တိုင်းမှူးတွေ၊ အရာရှိအရာခံတွေ မကြာခဏ လာပြီး ပူဇော်ကန်တော့ ဆုတောင်း လေ့ရှိတယ်။ ၈ မျက်နှာ ၈ ဒေါင့်ထဲက ခြင်္သေ့ရုပ်ဒေါင့်ကိုမှ မိုးကြိုးပစ်တယ် ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ခြင်္သေ့ ကိုးကွယ်သူတွေအတွက်အလားအလာ မကောင်းဘူး လို့ လူတွေ အတိတ်ကောက်ကြတယ်” ဟု လားရှိုိး မန်ဆူစေတီအနီးနေထိုင်သူတဦးက ပြော၏။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 0:280comments
မြ၀တီမြို့တွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်မည့် အခြေအနေရှိ
ရဲရင့် / ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀
မြ၀တီမြို့ပြင်ရှိ ဒီကေဘီအေတပ်ရင်း (၉၀၂) ခွဲထွက်အဖွဲ့၏ တပ်စခန်းနယ်မြေအနီးတွင် နအဖတပ်များ လာရောက် အခိုင်အမာတပ်စွဲ ၀ိုင်းရံထားသဖြင့် မကြာမီ မြို့တွင်းတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု ဒီကေဘီအေအဖွဲ့က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ နအဖတပ်၏ ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကို လက်မခံဘဲ လက်တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု (၉၀၂) ဒီကေဘီအေတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ကျော်သက်က ပြောသည်။
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဆိုင်းပုဒ် ထောင်ပွဲ ပြီးစီး
အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်။ ကေအိုင်စီ
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့ရှိ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(PSDP)က ၎င်းတို့၏ ပါတီရုံးရှေ့၌ ပါတီဆိုင်းပုဒ်ကို အောက်တို ဘာလ ၉ရက်နေ့၊ စနေနေ့မနက်တွင် တည်ထောင်လိုက်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးက ကေအိုင်စီကို ယခုလို ပြောသည်။
“အတိအကျ ပြောရရင် ၁၀နာရီနဲ့ ၃၁မိနစ်အချိန်မှာ ပါတီဆိုင်းပုဒ်ကို ထောင်ပါတယ်။ ဆိုင်းပုဒ်မှာ ကျမတို့ ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်လောင်း ၁၈ဦးပုံကို ထောင်ထားတယ်။ အပေါ်နားလေးမှာ ပါတီ Logo လေးပါပြီး သူ့အောက်နားမှာ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို မဲပေးပါဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးပါတယ်။ ဒီပါတီဆိုင်းပုဒ်ထောင်ပွဲမှာ မူးဟှား(အဒေါ်)တို့ကတော့ မဖိတ် ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန် အစည်းအဝေးလုပ်နေကျအတိုင်းပဲ စနေနေ့မှာပေါ့နော်။ လုပ်တာလေ။”ဟု ဖားအံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းစေအွာက ပြောသည်။
အလျားပေ ၄၀၊ အနံပေ ၁၀ခန့်ရှိသည့် PSDP ပါတီ၏ သစ်သားဆိုင်းပုဒ်ကို ဖားအံမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ထုံးအိုင်လမ်း မိုး ကယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ရှိ ၎င်းတို့၏ ပါတီရုံးရှေ့တွင် ထူထောင်အပြီး
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:440comments
စစ်ဆေးရုံရန် ဆေးကုသရန် ငြင်းဆန်မှုကြောင့် လေးနှစ်သားကလေး သေဆုံး click
ရခိုင်မျိုးစောင့်အုပ်စု (၃) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ဂျပန်တွင် ကျင်းပ click
အမေရိကရောက် တေးဂီတအဖွဲ့ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်သွားကြ click
နအဖစစ်တပ်က ဓားပြတိုက်၍ အဘွားအိုတဦးကို ပစ်သတ် click
လွှတ်ပေးမည့်စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဖို့ မမျှော်လင့် click
အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးမည်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မပါနိုင် click
ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စ်မွန်တူးတူး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် click
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ click
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက် click
ချင်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တဦး လူ့အခွင့်အရေးဆုရ click
ဇီးကုန်းမြို့၌ မဲမပေးဘဲ နေနိုင်သည်ဆိုသည့် ပညာပေးမှုပြုလုပ် click
မန္တလေးမှာ ရေကြီးနေဆဲ click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 12:230comments
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေး ကုလအတွင်း ရေးမှူးချုပ် ထပ်မံ ပြောဆို
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီးမွန်းက မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ လာမဲ့ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲကို ပွင့်လင်းမျှတမှု ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပါဝင် နိုင်အောင် အာမခံချက်ပေးဖို့ မိမိ ဆက်လက် တိုက်တွန်းနေကြောင်း အောက်တိုဘာ ၆ ရက် မနေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မိမိရဲ့အဲဒီတိုက်တွန်းချက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြော ကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဘန်ကီးမွန်းက ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 21:480comments
တော်လှန်ရေးနယ်မြေ နှလုံးသားများ (တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ)
တက္ကသိုလ်ပြီးခါစ ၈၈ အရေးခင်းဖြစ်တော့ အင်တိုက်အားတိုက် အချိန်ပြည့်ပါဝင် ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက် ပြောင်းလဲရန် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲတွင်လူရောစိတ်ပါ နှစ်မြုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၈၈ အရေးခင်းတောက်ရှောက် မောပန်းရမှန်း သတိမရ၊ ဒိထက်မက တော်ရုံလူမလုပ်နိုင်သော အရာများကို ရဲရင့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် အတိုင်းတာတစ်ခုထိ ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော်လည်း
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 0:270comments
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အကျဉ်းသား (၁) သောင်းကျော် လွတ်ဖို့ရှိ click
ဆင်ဖြူ နေပြည်တော်သို့ ယူမည့်နေ့ မိုးကြီးလေကြီးကျ၍ အတိတ်နမိတ်မကောင်းဟုဆို click
မန္တလေး ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီ လိုအပ် click
မန္တလေးမြို့ပေါ် ရေကြီးသည့်ပုံများ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
သမီး အားမုဒိမ်း ပြု ကျင့် သော တပ်ကြပ်ကြီးကို ဖခင်ဖြစ်သူက ဓါးနှင့် ခုတ်သက် Click
မြို့ တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်း လုပ်ချလိုက်ပုံက အရေးအခင်းထိဖြစ်သွားနိုင် Click
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်မှာ မိုးကြီးပြီး စပါးရင့်မှည့်ချိန် လယ်များ ရေနစ်နေ click
မန္တလေးရေးကြီး (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
မန္တလေးက ရပ်ကွက်များတွင် ခုထိ ရေကြီးနေဆဲ click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 0:120comments
အဆိုတော်လေးဖြူ ၏ အဖေ မရှိတော့သည့်နောက် သီချင်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်း ကာ အတိတ်မှ ယခုတိုင်
နိုင်ငံရေးကိုလုပ်ကြံမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ အပစ်မဲ့ ပြည်သူ ရဟန်းသင်္ဃာများကိုသက်ဖျက်မှုတိုကို ပြန်လည်သတိရ မှတ်မိစေရန် ရည်မှန်း၍ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 17:240comments
မန္တလေးတ၀ိုက် ရေကြီး Click
မန္တလေးဘက်မှာ ရေကြီးရေလျှံ Click
ကြံ့ဖွတ်ပါတီအတွက် မဲဆွယ်တရားဟောလို့ ဝတ်ပြုလာတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ မကျေနပ် click
US ရောက်မြန်မာအဆိုတော်များ ဗီဇာပြန်ရုပ်သိမ်း Click
မဲမပေးရေး နောက်ဆုံးပေါ် စည်းရုံးရေး Click
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိင် ငံသို့ တနင်္လာနေ့ တွင် ရောက်မည် Click
ထာဝယ်ဆိပ်ကမ်း၊ ထိုင်းနှင့်အီတလီ ပူးတွဲဆောက်မည် Click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေဘေး (၁၅) ဦး သေ click
- ချီလီမိုင်းလုပ်သားတွေရှိရာ ကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်း ပွင့်ပြီ click
- ကင်ဂျုံအန် ပထမဆုံးအကြိမ် လူရှေ့ထွက်လာ click
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 0:330comments
အန္ဒမန်-နီကိုဘာ ခေါ် ကပ္ပလီကျွန်းမှပေးစာ ...
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ...
မဲရုံတွေကို မသွားပါနဲ့၊ မဲမပေးပါနဲ့ (ဦးဝင်းတင်နှင...
ဒါကိုဖက်ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းပေးပါ ...
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပမည် click ...
မြန်မာ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ...
ရင်ဆိုင်လိုက်ကြစို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေကို ဥပေ...
အလှည့်ကျ မနွဲ့ကြေး ကာတွန်း။ ။Tamla ...
ဂျပန်အစိုးရ မှ ထိရောက်သော အားပေးကူညီမှုများ ပေးရန်ေ...
ပြင်ဝန်းချောင်းတွင် မျောနေသော အလောင်များ မြုပ်နှံ...
လန်းပြီ စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေ စီးပွားရှာဖို့ ဖွဲ့စ...
ကေအိုင်အိုပြဿနာတွင် ကေအင်ယူနှင့် ကရင်နီ ပါဝင်လာဖွယ...
ရေးမြို့ လူ ၅ဝဝ ကျော် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ...
ဂီရိမုန်တိုင်းအတွင်း အသေအပျောက်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု...
Second Pinlong ...
နေပြည်တော် တွင် မီးရောင်တောက်ပပုံ နေပြည်တော...
ဂျပန်နိုင်ငံ (RHQ) Refugee Head Quarter မှ အကြိမ်(...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ရေးအဖွဲ့ညှ...
မုန်တိုင်း အဓိက တိုက်ခတ်ရာ ဒေသများတွင် ရေနှင့် အစ...
အမျိုးသားညွန့် ပေါင်း အလံတော်နှင် ထပ်တူ...
ဂီရိဆိုက်ကလုံး တနာရီလျှင် ပြင်းအား (၁၄၇) မိုင်နှုန...
ရန်ကုန်တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အမြင်ကို လွတ်လပ်စြွာ...
၂၀၁၀ ပြည်သူ ရွေးကောက်ပွဲ .......... ရလဒ် ??? ...
ကချင်ငြိမ်းအဖွဲ့ စစ်ရေးပြင် click ရန်ကုန်တိုင်းတွင...
မြန်မာရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ကော်မတီ (ဂျပန်) မှ ကုလ...
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်လာမလား၊ သွေးစွန်းကြဦးမှာလား?? ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရန် ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိ...
၂၀၁၀ ကြို တင်မဲပေးခွင့် ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြ ပွဲ (တိုကျ...
မဲရုံတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် မပေးခြင်းအား သတင်းထော...
ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အောက်တိုဘာ...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ရဲ့ အသက် (၄၈) နှ...
ဂျပန်ရှိ မြန်မာသံရုံးက ကြိုတင်မဲ ကောက်မည် click နိ...
မြန်မာပြည်တွင်း ရဲရင့် စွာ ပြည်သူဆန္ဒထုတ်ဖော် နအဖရ...
ဒီ ပုံလေးကတော ကာတွန်း ဟန်လေးရဲ့ ရိုက်ချက်ပဲ ဖြစ...
NLDသည် တရားဝင် ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်...
ဗမာ့တပ်မတော်၏ ခေတ်သစ်ကျွန် ကျေးလက်ဒေသနေ ကရင်ပြည်သူ...
အလောင်းဖျောက်သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး စစ်တွေ နာရေးကူညီမှု ...
မဲပေးခွင့်ပေးတာဟာ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီဟု ဒေါ်အောင်ဆန်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲပေးဖို့ ငြင်းဆို နိုဝင်ဘာလ...
လားရှိုး သမိုင်းဝင် စေတီ အင်္ဂါဒေါင့် ခြင်္သေ့ရုပ် မ...
မြ၀တီမြို့တွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်မည့် အခြေအနေရှိ ရဲရင့်...
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဆိုင်းပုဒ် ထောင်ပွဲ ပြီ...
စစ်ဆေးရုံရန် ဆေးကုသရန် ငြင်းဆန်မှုကြောင့် လေးနှစ်သာ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေး ကုလအတွင်း ရေးမှူး...
တော်လှန်ရေးနယ်မြေ နှလုံးသားများ (တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇ...
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အကျဉ်းသား (၁) သောင်းကျော် လ...
အဖေ မရှိတော့သည့်နောက် အဆိုတော်လေးဖြူ ၏ အဖေ မ...
မန္တလေးတ၀ိုက် ရေကြီး Click မန္တလေးဘက်မှာ ရေကြီးရေလှ...
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်ရေးကို ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွ...
အမိ ကရင်ပြည်နယ်မှ နအဖ အစိုးရရဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမ...
ကာတွန်း ဟန်လေး ၏ ပြောင်မြောက်သော လက်ရာ
တစ်လကျော်အတွင်း အပစ်ရပ်ကရင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှ အင်အား ...
ပဲခူးတွင် အရပ်သား လူငယ် (၂)ဦးအား ပစ်သက်ခဲ့သော ဗိ...
၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်း ...ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ...
မယ်လအူး နှင့် မယ်ရာမို ဒုက္ခသည် စခန်း တွင်တုတ်ကွေး...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ယုဇန ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားများအား နအဖ မ...
ဒို့ ပါတီ ၊ဒို့အဖွဲ့အစည်း၊ ဒို့အာဏာ ဆက်လက...
အရှေတောင်အာရှ အတွင်း ဒီမိုကရေစီ ကူပြောင်းခြင်းတွင်...
ဒုက္ခသည်များပြန်ပို့ မယ်ကိစ္စအတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည...
မြန်မာဒုက္ခသည် တွေကို ပြန်ပို့ မယ်လို ထိုင်းနိုင်ငံ...
‘ရောင်နီဦးဆီသို့ …’ အမည်ရ ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုလေ...
အားလုံးပါဝင်ဖို့စီစဉ်ထားပါသတဲ့..... ငါ တိုတော ...
မြင်းခြံမြို့ တွင် တရားခံ ငွေပေးနိုင်ရင် ထောင်မကျ...
ပဲခူးက စစ်သား ၇ဦး နှင့် ရဲ ၄ ဦးတိုကို ဖမ်:ချုပ် ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လာအိုသို့ရောက်ရှိ Cli...
အဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်များက ချင်းခေါင်းဆောင်များကို သွာ...
2010 ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ(ဂျပန်)၏ လပါ...
မြန်မာ့အရေး အားပေးဖို့ Sonia Gandhi ကို အိန္ဒိယရောက...
မြန်မာ့အရေး ဖိအားပေးဖို့် ဘန်ကီမွန်း အစည်းအဝေးခေါ် ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အား အသိအမှတ်မပြုရေး ဂျပန်လွတ...
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဈေးဆိုင်ဖွင့်သူများအား ရိက္ခာေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မည်ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် ပြည...
KNU (Japan) ၏ ကိုယ်စားလှယ် စောမျိုးခိုင်ရှင်း သည...
နအဖ တပ်တွေစစ်ရေးပြင်ဆင်နေသဖြင့် အရေးပေါ်တပ်လှန့် ထာ...
ကရင်ဒုက္ခသည် ၁ သောင်းကျော်ခန့်ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ...
ရွေးကောက်ပွဲ နမိတ် ကောင်း ဆင်ဖြူ တဲ့မြန်မာ ပတ...